Medjet dia nanitatra ny tombotsoan'ny fitaterana COVID-19 mba hampidirana ny dia any Costa Rica
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Costa Rica » Medjet dia nanitatra ny tombotsoan'ny fitaterana COVID-19 mba hampidirana ny dia any Costa Rica
Hatramin'ny 1 Novambra 2020, Costa Rica dia hanokatra ny sisintaniny amin'ireo mpandeha amerikanina ary tsy mila ratsy intsony Covid-19 valin'ny fitsapana hiditra ao amin'ny firenena.
Mialoha an'ity vaovao ity, Medjet, orinasan-tseranana fitaterana an-habakabaka sy fiarovana ny filaminana, dia manitatra ny lisitry ny toerana any ivelany izay anolorana fitaterana fiaramanidina COVID-19.
Raha misy mpikambana ao amin'ny Medjet naiditra hopitaly miaraka amin'ny COVID-19 mandritra ny diany any amin'ny 48 Etazonia, Kanada, Meksika, Karaiba, ary Costa Rica ankehitriny, dia afaka entina any amin'ny hopitaly izay tiany any an-trano.
“Rehefa mihamaro ny sisintany misokatra, manohy manitatra izany tombony izany izahay. Ny ahiahinay voalohany indrindra dia ny fiarovana ireo mpikambana mpandehandeha sy ireo ekipazy nampiasaina tamin'ny famindrana azo antoka. Ny logistika tafiditra amin'ny fandaminana ny fitaterana ara-pitsaboana Covid dia mijanona ho sarotra ihany, saingy manohy miasa hatrany izahay amin'ny olana mba hamafana toerana maro kokoa ho an'ity serivisy ity, "hoy i John Gobbels, VP ary ny Chief Operating Officer ao Medjet.
Medjet no fandaharana voalohany tamin'ny karazany nanampy ny fitaterana ho an'ny COVID-19 tamin'ny 19 Oktobra 2020.
Nanjary mpikambana ao amin'ny fikambanana fizahan-tany malaza i Torkia
Mety hosakanana ny fanarenana ny fizahan-tany amerikanina raha toa ka mandresy i Trump amin'ny fihodinana faharoa